ARCHIVE, COVER STORY, INVESTIGATION, कर तथा कानुन » मारुती सिमेन्ट उद्योगले करोडौं कर छलेको भन्दै राजश्वको छापा, तर दोश्रोपटकपनि सेटिङमै दिईयो उन्मुक्ति !
काठमाडौँ - करोडौं रुपैयाँ राजश्व छलीको आरोपमा आन्तरिक राजश्व विभागले केहि समय अगाडी मारुती सिमेन्ट उद्योगमा छापा मारेकोमा अहिले सेटिङकै भरमा उद्योगलाई उन्मुक्ति दिईएको खुलासा भएको छ । यसअघि पनि कमसल सिमेन्ट बेचेकोदेखि बिजुली चोरेको सम्मका प्रमाण फेला परेको मारुती सिमेन्टले कर छली प्रकरणमा पनि उन्मुक्ति पाएको हो । विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले जफत गरेका कागजातहरु उपर कारवाही नगरी सेटिङ'मै उद्योगलाई उन्मुक्ति दिईएको छ । उद्योगले करोडौं रुपैयाँ राजश्व छलेको भन्दै राजश्व विभागले केहि समय अघि सिमेन्ट उद्योगमा छापा पारेको थियो ।
यसअघि पनि ५० लाख राजश्व छाल्दा दिईएको थियो उन्मुक्ति !
राज्यको कानुनमाथि धावा बोल्दै मारुती सिमेन्ट उद्योगले मनपरी गरिरहेको छ । यसो त मारुती सिमेन्ट उद्योगले करछली गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि चन्द्रोदयपुर गाविसस्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले ५० लाखभन्दा बढी कर छली गरेको रहस्य खुलेको थियो । क्लिङ्कर र सिमेन्ट जिल्ला बाहिर निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेर यति ठूलो कर छली भएको थियो । अर्थ सरोकार डटकमको प्रश्नमा तत्कालीन जिविस सिरहाका राजश्व शाखा प्रमुख महेन्द्र यादवले भनेका थिए , 'मारुतीले क्लिन्करको निकासी कर नतिरेका कारण जिविसलाई ठूलो नोक्सान भएको छ। अहिलेसम्म मारुतीले करिब ५० लाख भन्दा बढी कर तिरेका छैन्।’तर यसअघिपनि सेटिङ'कै भरमा मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई उन्मुक्ति दिईएको थियो ।
अख्तियार पुग्ने भो केस !
मारुती सिमेन्ट सकेको कर छल्ने, र राजश्व विभाग छापा मारेजस्तो गरेर सेटिङ मिलाउने धन्दामा लागेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभाग इटहरी र मारुती सिमेन्टलाई समेत प्रतिपक्षी बनाएर इटहरीकै एक व्यवसायीहरुको समूह अख्तियार जाने भएको छ । 'हामीले सानो गल्ती गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने । अनि मारुती सिमेन्टलेचाहिं जे गरेपनि हुने । कर जति छलेपनि हुने । यो देश र जनताप्रतिको बेइमानी हो । हामी अव समूह नै मिलाएर अख्तियार जाँदैछौं । देश लुट्ने मारुती सिमेन्ट र तिनका ठुलाबडा भनौदा राजश्वमारा हाकिमहरुलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।' अख्तियार जाने तयारीमा रहेका एक व्यवसायीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।
मारुती सिमेन्टका कर्मचारीले फोन उठाउनै छाडे !
यता यसअघि मारुती सिमेन्टले गरेका कर्तुतहरुबारे आफुलाई केहिपनि थाहा नभएको बताउने मारुती सिमेन्ट उद्योगका जिम्मेवार कर्मचारी यस प्रकरणमा हामीले कार्यालयनै गएर सोधेपछी सम्पर्क बाहिर हुन थालेका छन् । केहि समयअघि हामीले मारुती सिमेन्टकै काठमाडौँस्थित कार्यालयमा बुझ्दा त्यहाँका कर्मचारी राजु श्रेष्ठले सबै कुरा 'मिलिसकेको' भन्दै शंकास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि सेटीङकै भरमा सबै कुरा मिलाएर मारुती सिमेन्टलाई उन्मुक्ति दिईएको खबर पाएपछि हामीले विभिन्न समयमा गरी करिव आधा दर्जन बढी पटक उनलाई फोन गर्दा पनि उनले फोन उठाएका छैनन् ।
Tags : ARCHIVE, COVER STORY, INVESTIGATION, कर तथा कानुन